Mayelana Nathi - Weihai Ruiyang Boats Development Co., Ltd.
Isikebhe se-Weihai Ruiyang
I-Weihai Ruiyang Boat Development Co., Ltd. yasungulwa ngo-2004, iyinkampani ehamba phambili yemikhiqizo yezikebhe, ibhizinisi lokuthuthukisa impahla yezemidlalo yamanzi. Sisebenza kakhulu ekuthuthukisweni, ekukhiqizeni nasekudayiseni ama-surfboard aphephethekayo, izikebhe ze-PVC eziphefumulayo, izikebhe ze-fiberglass nezikebhe ze-aluminium. Le nkampani inamafekthri amathathu, ahlanganisa indawo engaphezu kwamamitha-skwele angu-10,000, enochwepheshe bokukhiqiza abangaphezu kuka-150 kanye nenani eliphumayo lonyaka lezigidi ezingu-40. Ngesipiliyoni seminyaka engaphezu kweshumi ekukhiqizeni nasekuklameni, uRuiyang wenze uhlelo lokuphatha oluhlanganisa ukuklama, ukukhiqiza, ukuhlinzeka, ukuthengisa kanye nenkonzo.
Eminyakeni yamuva, siye sabamba iqhaza emibukisweni yezikebhe engaphezu kuka-30 ekhaya nakwamanye amazwe, ebonisa ubuhle bamabhizinisi wezikebhe zamaShayina.
Njengonjiniyela wokuqala wezikebhe e-Weihai, futhi singabathuthukisi besikebhe bokuqala ukuya olwandle ngokuphendula isu lezwe "lokuphuma". Kusukela yasungulwa, iRuiyang izibophezele ekwakheni imakethe yomhlaba wonke enombono womhlaba wonke. Ngokuthembela kuzinqubomgomo zohwebo ezivumayo ze-Weihai kanye nezinzuzo zechweba ezikahle, sibamba iqhaza elibonakalayo emqhudelwaneni wamazwe ngamazwe. Njengamanje, imikhiqizo yethu ithunyelwe emazweni nasezifundeni ezingaphezu kuka-40 emhlabeni, futhi sesifinyelele ukubambisana kwamasu nemikhiqizo eminingi edumile yamazwe ngamazwe. Ngo-2011, siphendula ubizo "lwe-inthanethi+", sidale imodi "ye-inthanethi+imboni yendabuko" ngosizo lwe-Amazon, i-Alibaba nezinye izinkundla, futhi sathuthukisa iziteshi eziku-inthanethi ngenkuthalo.
FREESUN Series Imikhiqizo
Enqubweni yokukhiqiza nokuklama, besilokhu sinamathela emoyeni "wobuciko" wenkampani.
Ibhrendi nobuchwepheshe kungukuqhudelana okuyinhloko kwenkampani yethu. Ukuthuthukiswa kweminyaka engaphezu kweshumi kwenze i-Ruiyang yakwazi ukukhula isuka ebhizinisini lokucubungula i-OEM ibe umholi wemboni yezokwakha, i-R&D, ukukhiqiza, ukuthengisa kanye nesevisi esekelwe ku-OEM ne-ODM. Sinabaklami abahlakaniphile nabanolwazi abangaphezu kweshumi kanye nabasebenzi bezobuchwepheshe abanolwazi abangaphezu kwe-100, futhi imikhiqizo imboza uchungechunge oluyi-10 lwamabhodi okugwedla aphephethekayo, izikebhe eziphefumulayo kanye namamodeli wemikhiqizo angaphezu kuka-40. Eminyakeni yakamuva, uRuiyang uqinise olwakhe ucwaningo nokuthuthukiswa komkhiqizo futhi wethula uhlobo lwe-FRESUN, oluthandwa ngamakhasimende emhlabeni jikelele.
Umgomo kaRuiyang Boats uwukuzinikela ekusebenziseni iminyaka yeqembu lethu yokuklama nesipiliyoni sokukhiqiza ukwenza yonke imikhiqizo esiyikhiqizayo iphelele, yanelise amakhasimende ethu futhi ithuthukise ukuncintisana kwawo.